Trenbolone Acetate (Tren ace) ntụ ntụ (10161-34-9) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Trenbolone ntụ ntụ Usoro / Trenbolone Acetate (Tren ace) ntụ ntụ
3.00 si 5 dabere na 3 ahịa Fim
SKU: 10161-34-9. Categories: Trenbolone ntụ ntụ Usoro, Anabolics Steroids
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Trenbolone Acetate (Tren ace) ntụ (10161-34-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Trenbolone Acetate (Tren ace) ntụ ntụ video
Raw Trenbolone Acetate (Tren ace) ntụ ntụ isi agwa
aha: Trenbolone Acetate ntụ ntụ ntụ ntụ
Raw Trenbolone Acetate (Tren ace) uzuzu eji eme ihe na steroid
Trenbolone Acetate ntụ ntụ na-akpọ Tren A, Tren ace ntụ ntụ (CAS 10161-34-9), Revalor, Finaplix, Finajet, site bodybuilders ma ọ bụ ndị nwe UGL.
Raw Trenbolone Acetate ntụ ntụ Usage
A na-ejikarị Trenbolone Acetate ntụ ntụ mee ihe na 35-150 mg / ụbọchị, ma karịa 50-100 mg / ụbọchị.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ 50-75 mg / ụbọchị ka ha bụrụ ezigbo ụdị usoro, na-enye ezigbo uru dịka akụkụ nke steroid steroid anabolic.
A na-ejikarị Trenbolone Acetate (CAS 10161-34-9) mee ihe na ntinye nke 35-150 mg / ụbọchị, ma karịa 50-100 mg / ụbọchị. Ngwakọta 35 na-abụkarị ihe kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta dị elu nke onwe gị na mmetụta ntinbolone-kpọmkwem. Mgbe trenbolone ojiji a na-achọ ihe dị ala ma dị irè, a ghaghị ịgbakwunye steroid nke anabolic injectable ọzọ. Masteron bụ ezigbo nhọrọ maka nzube a. Ọzọ, nhọrọ dị iche iche dị iche iche bụ testosterone.
Maka 150 mg / ọnụọgụgụ elu, a na-ejikarị ya mee ihe maka mgbakwụnye nke usoro nhụjuanya tụnyere 100 mg / ụbọchị karịa maka ọkwa ọzọ ma ọ bụ ike mmụba, nke egosipụrịrị ma ọ bụ nke kachasị elu na 100 mg / ụbọchị.
Mkpụrụ ọka milligram ndị a dị oke ala maka ụbụrụ anabolic injectable. Otu n'ime ihe kpatara ya bụ na trenbolone dị ịrịba ama nwere ike ịdị irè (dị irè maka milligram.) Ihe ọzọ kpatara ya bụ na n'ihi na acetate ester bụ ìhè dị iche iche, ọnụ ọgụgụ buru ibu dị arọ nke Trenbolone Acetate powder molecule bụ steroid na-arụ ọrụ.
Ịdọ aka ná ntị na ụzụ ma ọ bụ ntụ ntụ
Aghachi azụ dị egwu nke Equipoise bụ ogologo ndụ ya, nke nwere ike ịbụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 12. Nke a na - ebute ogologo oge mgbe ọgwụgwụ nke ikpeazụ mgbe ọkwa ndị ahụ adịghị ezu maka ezigbo anabolism, ma ọ bụ dị ala iji kwe ka mgbake gbanwee. Ihe ngwọta maka nsogbu a bụ iji Equipoise naanị na akụkụ mbụ nke usoro.
N'adịghị iche, pasent nke trenbolone nke na-arụ ọrụ steroid bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% ala. N'ihi nke a, nhazi usoro kwa izu maka trenbolone enanthate dị ntakịrị karịa nke acetate. Maka enanthate, usoro izuzu azu bụ 300-800 mg.
N'adịghị ka Trenbolone Acetate ntụ ntụ nke nwere ọkara ndụ nke nanị ihe dịka ụbọchị 1, ya mere a ghaghị inye ya kwa ụbọchị, trenbolone enanthate na-agbanye 2-4 ugboro kwa izu. Ọkara ndụ nwere ike ịbụ ihe gbasara 5 ụbọchị.
Ọ bụrụ na ejighị n'aka banyere nzaghachi onwe onye na trenbolone, acetate ester dị mma ka ọ na-ewepụ usoro ahụ ngwa ngwa. Ọ na-achọsi ike maka iji obere oge mee ihe ma ọ bụ maka izu ngwụsị nke usoro ogologo oge n'ihi na nkwụsị ọsọ ọsọ na-agbanwe ngwa ngwa site n'inwe ogo dị elu nke ruru eru maka nsonaazụ dị mma na ọkwa dị ala na-ekwe ka mgbake.
Ọ bụ ezie na iji trenbolone adịghị mkpa iji rụpụta nsonaazụ dị mma n'ime ọnụọgụ anabolic steroid, ọ nwere ike ịbụ aka dị ịrịba ama maka nsonaazụ dị otú ahụ.
Nkọ ụra na ntụ (CAS 10161-34-9)
Trenbolone Acetate na-agbaze ntụpọ = 200-205 F / 90-92 ° C
Trenbolone Acetate ntụ ntụ Marketing
III. raw Trenbolone Acetate (Tren ace) ntụ ntụ HNMR
Esi zụta Trenbolone Acetate ntụ ntụ (CAS 10161-34-9); zụta Tren ace ntụ ntụ si AASraw
AASRaw na-enye aka ọcha 99% trenbolone acetate raw powder to bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ogwu ojiji na mgbatị na uru ahịa, uru uru.
Trenbolone Acetate ntụ ntụ Ezi ntụziaka
10g Trenbolone Acetate ntụ ntụ
3 reviews maka Trenbolone Acetate (Tren ace) ntụ ntụ
Trenbolone Acetate (Tren ace) ntụ ntụ bụ ihe ọmụma
Enwere mmekọahụ ọ bụla ọzọ dị ka viagra maka nwanyị?
aga m azụta viagra online